N'ogbe XJC-Y02-3M mkpakọ ike transducers rụpụta na ụlọ ọrụ | XJCSENSOR
XJC-Y02-3M mkpakọ ike Transducers
1. XJCSENSOR klas ziri ezi: 0.2
2. uredị nrụgide, nzaghachi siri ike dị elu
3. ogologo ndụ ọrụ
4. Ihe: igwe anaghị agba nchara 17-4PH
5. mkpakọ ibu, adaba na mgbanwe echichi;
6. Nchekwa na mgbawa na-egosi ibu cell, nke ike-eji na ọjọọ gburugburu na ize ndụ ọnọdụ; High ike omume ugboro
7. Ibu Ibu Ibu Ibu cell na-enye oke ziri ezi. Ọ na-enweghị atụ nke ± 0,2%. Standardkpụrụ XJC-Y02-3M Ibu Ibu Ibu Ibu nwere ike gbanwee ma ọ bụ ahaziri iji mezuo ihe ị chọrọ na ọtụtụ ikike dị na ngwa anyị, na-eme ka ha dị maka mbupu awa 24.
A na-enye ngwaahịa a na mmekorita ya na ngwa elektrọnik.
Ezubere bọtịnụ Ibu Ibu iji tụọ ibu na mkpakọ, yana uru nke dịgasị iche iche, usoro dị iche iche na nha dị iche iche, oke ziri ezi, usoro mmeghachi omume dị elu dị elu, na njirimara ọkụ dị mma.
Karịsịa n'ọhịa nke obere ihe mmetụta dị ntakịrị, ọ nwere uru dị ike.
A na-arụpụta ihe nlereanya a na SZ, CN ma yie akara ngwaahịa anyị dum, na-eji teknụzụ mpempe akwụkwọ. Ọzọ imewe atụmatụ na-agụnye iji nke a nje enyemaka na-enye ukwuu ukwuu nchedo si sere na USB.
Sensor ụlọ (na-agbanwe mmewere, mwute doo) amị na-agbanwe mgbanwe n'okpuru ihe nke mpụga ike, nke mere na ndị na-eguzogide nje gage (akakabarede mmewere) pasted n'elu ya nwekwara deforms. Mgbe ndị na-eguzogide nje gage na oruru, ya na-eguzogide uru ga-agbanwe (abawanye). Nnukwu ma ọ bụ obere), mgbe ahụ, a na-agbanwe mgbanwe nguzogide ka ọ bụrụ mgbaàmà eletrik (voltage ma ọ bụ ugbu a) site na eriri elekere kwekọrọ, si otú a mezue usoro nke ịgbanwe ikike mpụga n'ime akara eletrik.
1. Force isi nso nke nlekota oru akụrụngwa igwe
2. itgba ike isi dị iche iche agaghị adị oke elu ma ọ bụ dị ala
3. A na-etinye ibu ahụ n'elu site na bọtịnụ bọtịnụ, nke na-eme ka ọrụ ike dị n'etiti.
XJCSENSOR na-enye ọtụtụ Canister Load Cells (nke a makwaara dị ka Kọlụm Ibu Ibu Cell) ezubere maka ngwa mkpakọ dị elu.
Modelsdị ndị a na-enye iwu siri ike nke nwere ikike sitere na 0.02 ruo 120KN.
Uzo eji ebu ibu dabere na usoro akwara siri ike. N'ihi oke ike ya, XJC-Y nwere ike iji ya mee ihe ngwa ngwa ngwa ngwa; ụkpụrụ nlele ụkpụrụ na-enye ohere static nha. N'agbanyeghị ntakịrị akụkụ ya, ihe mmetụta nwere ezi ziri ezi. A na-eji igwe anaghị agba nchara rụọ ọrụ bọtịnụ maka ikwe ka iji rụọ ọrụ.
Nke gara aga: XJC-Y01-13-A ibu ike transducers (0-1KN)
Osote: XJC-Y03-4M mkpakọ Ibu Ibu Cell
XJC-H120 Mkpakọ Ibu Ibu Cell
XJC-Z15-H9-2M Obere bọtịnụ ike ihe mmetụta (1 -...
XJC-Y01-13 Button ibu ike ihe mmetụta (0-1KN)
XJC-ZX-B mkpakọ Ibu Ibu Cell
XJC-Y01-13-A ibu ike transducers (0-1KN)
XJC-Y08 Mkpakọ Ibu Ibu Cell